> Resource> Utility> "Black ihuenyo" na mmalite (Windows 7, XP & Vista)
Ihuenyo na-aga nwa na mmalite?
Mgbe m malite kọmputa m ihe niile yiri ka a ga-arụ ọrụ ezi, ma mgbe a ka, kọmputa ihuenyo amama nwa, ike ìhè na-anọgide green. Ọ bụrụ na m agbanyụ na mgbe ahụ ịgbanwee na ọzọ, ihuenyo (ọzọ) amalite, na mgbe ahụ (ọzọ) mgbe a sekọnd ole na ole, shuts ala. M nwere ike iji kọmputa m ugbu a, ọbụna Nchekwa mode. Ọ bụla ndụmọdụ?
Ihe mbụ ị na-eme mgbe ị na-ezute na nke a bụ ịgbanwee gaa na Nchekwa na ọnọdụ, ịlele ma i nwere ike idozi nke a nwa ihuenyo. Mgbe niile, i nwere ike inwe ụfọdụ kọmputa atule na ịrụzi utilities n'ebe ahụ, nke ga-enyere gị aka. Ihe atụ, ụfọdụ nwa ihuenyo on mmalite e mere site mbanye, na ị nwere ike mfe idozi ya site emelite ya. Gịnị ma ọ bụrụ nke a adịghị aka ma ọ bụ gị ọbụna nwere ike ịnweta Nchekwa mode? Na-emekarị, ọ bụ banyere nsogbu gị usoro ndekọ. Ị mkpa a ngwá ọrụ ka buut gị na kọmputa na obibi ya.
Wondershare LiveBoot buut CD / USB bụ ezi mmasi, nke nwere ike inyere gị aka buut kọmputa gị ọma. Mgbe ahụ, ị pụrụ iji ya idozi kọmputa gị nwa ihuenyo on mmalite ole na ole clicks site onwe gị, ọbụna na ị na-a kọmputa novice.
Ịzụta ihe omume mbụ, mgbe ahụ ị ga-enweta a aha koodu na a download njikọ maka usoro ihe omume. Download na wụnye ya na ezi-na-arụ ọrụ na kọmputa. Wee soro nzọụkwụ n'okpuru ike gị bootable CD ma ọ bụ USB mbanye na idozi kọmputa gị nwa ihuenyo na buut na nkeji.
3 nzọụkwụ idozi kọmputa gị nwa ihuenyo na mmalite
Nke mbụ niile, ịkwesịrị ịmepụta a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye na-eme ka gị na kọmputa na-agba ọsọ were were. Na-agba ọsọ usoro ihe omume ị ga-enweta a ọkachamara interface dị ka ndị na. Fanye a ide CD ma ọ bụ USB mbanye n'ime kọmputa na pịa ọkụ bọtịnụ na interface. OK ugbu a, ọrụ gị na-eme. Ekpe ihe ga-okokụre akpaghị aka site na usoro ihe omume, na gị na mkpa iji wepụ gị bootable CD / USB mbanye mgbe usoro na dechara.
Step2. Buut gị nwa ihuenyo kọmputa
Ugbu a, ị nwere ike itinye ndị bootable CD / USB mbanye n'ime gị nwa ihuenyo kọmputa na Malitegharịa ekwentị ya. Oge a, ekwela ka kọmputa mmalite dị na mbụ, ị mkpa pịa F12 ozugbo mgbe usoro amalite loading. Mgbe ahụ ị ga-esi n'ime buut Ngwaọrụ NchNhr. Họrọ "onboard ma ọ bụ USB CD-ROM Drive" n'okpuru ya na ị ga-esi a menu dị ka ndị na. Họrọ "buut si LiveBoot" iji nweta gị na kọmputa.
Step3. Idozi nwa ihuenyo on mmalite
Mgbe ị na-esi n'ime kọmputa gị, na Wondershare LiveBoot 2012 ga-akpaghị aka na-agba ọsọ n'ihi na ị. Gaa na "Windows Iweghachite" na-ahọrọ "buut Crash Ngwọta". Ebe ị ga-esi ụfọdụ symtoms banyere kọmputa gị nwa ihuenyo na-akpata mere na kọmputa gị na-enyo nwa ihuenyo on mmalite. Chọta otu na-akọwa ihe ị na-nzute ugbu a ma na-agbaso kwekọrọ ekwekọ ngwọta n'okpuru idozi gị nke.
Mgbe nsogbu ofu, wepụ nke LiveBoot CD / USB mbanye na kọmputa gị, na Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na i nwere ike buut kọmputa gị elu nke ọma.
Otú e si edozi Computer Black ihuenyo na buut
Ihe kacha ụzọ Idozi laptọọpụ freezes
Gịnị Celebrity Photo ntapu Pụrụ Ịkụziri Anyị Banyere Data Management na Nche
Chefuru MSN Paswọdu! Esi ya Back
Olee otú ịrụzi "Bootmgr abịakọrọ" Error
Olee otú ndabere gị OS na Windows
Olee otú Igosi diski ike nchọpụta nsogbu na Disk Atule Ngwá Ọrụ
Olee otú SPLIT nkebi enweghị Data Loss
Olee otú Idozi Awt.dll Njehie Ọma